2017 April - All Things Myanmar Burmese
Sai Sai @ Nanda Sai’s wedding
အိုင်ဒေါမတိုင်ခင်တစ်ရက်မှာ ရေးချင်လျက်နဲ့ “ငါ့ လူမုန်းများပါ့မယ်လေ။” ဆို တမင်မရေးပဲ ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေမိတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း စိတ်ထဲ
Music and film piracy burns Myanmar artists, producers
Artists in Myanmar faceathreat to their livelihood in the thriving
Sai Sai Kham Hlaing’s Birthday Celebration Free Ticket Giveaway
Myanmar popular hip-hop artist Sai Sai Kham Hlaing will be celebrating his
◾️သံမဏိနှင်းဆီထုတ်ဝေသူအသတ်ခံရမှု ရဲတပ်ဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ကွဲလွဲချက်များရှိနေ၍ မိသားစုဝင်များ နစ်နာရကြောင်းရှင်းလင်း ပြောဆို ရန်ကုန်၊ ဧပြီ-၂၁ သံမဏိနှင်းဆီဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူ ကို ဝေယံဟိန်းအသတ်ခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တရားခံဖမ်းဆီးရမိကြောင်းနှင့် တရားခံစစ်ဆေး ပေါ်ပေါက်ချက်များအရ လူမှုရေးဖောက်ပြန်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ရာတွင် ကွဲလွဲချက်များရှိနေကြောင်း မိသားစုဝင်များက ဧပြီ ၂၁ ရက် ည ၇ နာရီခန့်တွင် ပုဇွန်တောင် မြို့နယ် ဗိုလ်တထောင်ဈေးလမ်းရှိ ဂျာနယ်တိုက်၌ မီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့သည်။ “နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့ဟာကို သူတို့ မြန်မြန်ရှင်းချင်တာ တစ်ချက်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲ့ကျနေတဲ့ပုံရိပ်ကို လေးရက်အတွင်း ဖော်နိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ ပုံရိပ်တက်စေချင်တဲ့အတွက် သတင်းထုတ်ပြန်တာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင် တယ်။ ဒါပေမဲ့ မိသားစုအနေနဲ့ ထိခိုက်နစ်နာသွားတယ်။ဝေယံဟိန်း လူမှုရေးကိစ္စကြောင့် အသတ်ခံလိုက်ရတယ်။ လက်ခံနိုင်တယ်။ သူလုပ်သွားလို့ သူခံရတာ။ လူမှုရေးဆိုတာတောင်မှ တရားခံပြောတာ […]
Words from Aung La Nsang
Met some diplomats who will be working at the American Embassy in Myanmar this year. Got to shareameal with them and they are super nice people and this make me excited about the future of the two countries. Happy Thingyan to all my Myanmar people out there. 🇲🇲🇺🇸
Khit lay & Thit Lays’ three months old birthday donation
“ခေတ်လေး နဲ့ သစ်လေး” သမီးလေးတို့ ဒီနေ့ “၃”လပြည့်တယ်,,, မှတ်မှတ်ရရ အလှူလေး လုပ်မယ်လို့ဖေ နဲ့မေတို့ စီစဉ်ကြတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ဟိုးအရင် ကျောင်းစတည်ထောင်ကတည်းက ဖေဖေလှူခဲ့ ရံပုံငွေရှာပေးခဲ့ဖူးတဲ့ YGW ပရဟိတကျောင်းကိုပဲသွားဖြစ်တယ်, မေမေကတစ်ခါမှမရောက်ဖူးဘူးရယ်,,,မေမေ အလှူပေါင်းများစွာ ကျောင်းပေါင်းများစွာကို သွားခဲ့ဖူးတယ်,,အသည်းနုတဲ့မေမေ အသည်းမာအောင်ကြိုးစားခဲ့နိုင်တာချည်းပဲ ,,မျက်ရည်လည်းမကျအောင်ထိန်းတယ်,,,မေမေတို့က အားပေးဖို့သွားကြတာမဟုတ်လား,,, ကိုယ်တိုင်အမေနေရာရောက်မှ မိဘမဲ့ကလေးတွေဆီ ဒီနေ့ပထမဦးဆုံး မေမေရောက်ခဲ့တာပေါ့ ,,သမီးလေးတို့အရွယ် မောင်လေးညီမလေး လသားကလေးတွေကိုမြင်ရတော့ မေမေ့အသည်းတွေကွဲကြေမတတ်ပါပဲ,,,ခေါင်းထဲမှာလည်းမေမေဘာတွေများလုပ်ပေးနိုင်မလဲ မေမေကိုယ်တိုင်မလုပ်ပေးနိုင်တာတွေကို အကူအညီဘယ်လိုတောင်းရမလဲစုံလို့ပေါ့,,,ကလေးတွေကိုမေတ္တာနဲ့ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေကြတဲ့စေတနာရှင်ဝန်ထမ်းတွေလည်း လူအင်အားမမျှတပေမယ့်ဖြစ်နိုင်တတ်နိုင်သမျှ ကို ဂရုစိုက်နေကြရှာပါတယ် ,,ဘုန်းဘုန်းတွေလည်းကလေးတွေကို ချစ်ကြရှာတယ်,,မေမေကတော့ ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရရော အမေတစ်ယောက်ရဲ့ သားသမီးတွေအတွက်လိုအပ်ချက်တွေသိတဲ့ရှုထောင့်ကရော လိုတာတွေတတွတ်တွတ်မှာနေခဲ့မိတယ်,,, ဒါပေမယ့်လည်းလေ လိုအပ်တာတွေ မေမေတို့အလှုရှင်တွေ မမြင်နိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေအများသားဆိုတာ မေမေကောင်းကောင်းနားလည်မိတာပေါ့,, သေချာတာကတော့ မေမေဟာ ငွေအားလေးနဲ့သာတတ်နိုင်သမျှ ဝထ္တုပစ္စည်းတွေ […]
You are currently browsing the All Things Myanmar Burmese weblog archives for April, 2017.